Umnii addaa Mootummaa naannoo Affaar fi gareen hidhatootaa Uguugumuu jedhamu haleellaa rawwatanii lubbuun namootan 350 ol galafatamuu isaa Mootummaan naannoo Sumaalee beekisiseera.
Bakkewan nannoleen lamman gaafii irratti kaasaa jiran 3 keessaa tokkoo kan taate, magaalaa Sumalonnii GarbaIisee jedhanii waman, affaaroni imoo Gadamaayituu Jedhan keessatii haleellaa rawwatame Kanaan harka caalatti kan miidhaman dubartoota fi ijoollewan ta’uun isaanii himameera.
Akka balaan kun hin raawwanee umnii Mootummaa Feederaalaa waan issa irraa eegamuu hin goone kan jedhee Mootummaan naannoo sumaalee magaalatii irratii badiinsii guddaan qaqqabuu isaa ibseera.
Mootummaan naannoo Affaar dhimma kana irratii kallattidhaan deebii kennuu baatus, namootan Mootummaa naanichaa keessaa hojjatan akka himaniti umnii addaa mootummaa nannoos ta’ee gareen Uguugumuu Jedhamuu haleellaa sana keessaa harka hin qabu.
Inumaayuu akka naannootii hidhannoo isaa hin eeyyamannee hidhatee kan naannoo Affaar irratii haleellaa geggeessaa jiru Mootummaa naannoo Sumaaleetii jechuu isaanii gabaasaan VOA Addis Chekol gabaaseera.